अचम्मको कुरा, ब्याक्टेरिया रोगका वाहक मात्र हैन, मान्छेको असल साथी पनि पो रहेछ ! | Ratopati
अचम्मको कुरा, ब्याक्टेरिया रोगका वाहक मात्र हैन, मान्छेको असल साथी पनि पो रहेछ !
ब्याक्टेरिया भन्ने बित्तिकै हामी डरलाग्दा रोहरुबारे कल्पना गरेर तर्सन थाल्छौ । किनभने, टाइफाइ, हैजा, कुष्टरोग,प्लेग, टी.बी., डिप्थेरिया, निमोनिया, लगायत अन्य धेरै खतरनाक रोगहरु र समस्याहरु ब्यकटेरियाकै कारण हुन्छन् । त्यसैले ब्यक्टेरियाको नाम सुनेर हामी तर्सनु स्वभाविकै नै हो ।
व्याक्टेरिया पृथ्वीका हरेक कुनामा, माटो, समुद्र, अन्टार्कटिकाका अथाहा हिउँमा समेत पाइन्छ । तीमध्ये धेरैजसो बोटविरुवा, प्राणीका शरीरमा बसोबास गर्ने गर्छन् । एउटा मानिसको शरीरभित्र मात्रै उसको शरीरको जम्मा कोषहरुको तुलनामा १० गुनाभन्दा बढी त व्याक्टेरिया नै हुन्छ । तीमध्ये धेरैजसो चाहिँ पाचन प्रणालीमा बसोबास गरेका हुन्छन् ।
तर सबै ब्याक्टेरियाहरु मान्छेका लागि खराब हुँदैनन् । अहिलेसम्म संसारमा करिब १६ सय देखि दुई हजार थरीका ब्याक्टेरियाहरु पत्ता लागेका छन् । ती मध्ये अतिथोरै मात्राले अर्थात करीब २०० थरि ब्याक्टेरियाले मात्र हामीलाई रोग लगाउछ । यस्ता ब्याक्टेरियाहरुलाई प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया pathogenic bacteria भनिन्छ । अरु व्याक्टेरियाहरु मान्छेका लागि हानिरहित हुन्छन् । बरु, धरै जसो ब्याक्टेरिया त कुनै न कनै रुपमा मान्छे र प्रकृतिका लागि अत्यन्तै उपयोगी नै पनि हुन्छन् ।
ब्याक्टेरिया हावा, पानी–जमीन सबै ठाउँमा हुन्छ । यतिसम्म कि, यो समद्र, महासागरहरुका गहिरो पिँधहरुमा समेत पाइन्छ । तर यो हाम्रो नांगो आँखाले देख्ना सकिदैन । यो अत्यन्तै सुक्ष्म हुन्छ । आकारमा ब्याक्टेरिया एक देखि १० माइक्रोमिटर (एक इन्चको पच्चीस हजार भाग बराबर आकारको ) हुन्छ ।
यो चित्र रोग लगाउने एक किसिमको ब्याक्टेरियाका हो यस ब्याक्टेरियाको नाम Neisseria meningitidis हो । यसले ब्याक्टेरियाका कारण हुने मेनेन्जाइटिस र अन्य रोगहरु लगाउछ । ब्याक्टेरियाले मरेका प्राणी र विरुवाहरुलाई कुहाउने (सडाउने) काम गर्छ ।
एक छिन कल्पना गर्नुहोस त, ब्याक्टेरिया नहुदो हो त यो संसार कस्तो हुँदो होला ? संसार नै मरेका प्राणीहरु र विरुवाहरुले ढाकिने थियो !
प्राणी तथा विरुवाहरु सडनु भनेको त्यसलाई ब्याक्टेरियाले खाएको हो । त्यसरी खाने क्रममा ब्याक्टेरियाले त्यसको जटील पदार्थहरु (Complicated substances) लाई सामन्य तुलाई दिन्छ । र, त्यही चीज नै जीवित प्राणी वा विरुवाले ग्रहण गर्न सक्ने रुपमा माटो, पानी वा हावामा मिल्छ ।
जम्मा भन्ने हो भने, मान्छेले ब्याक्टेरियाको उपयोगिता थोरै मात्र जानेका छन् । अहिले भन्दा धेरै ढंगले जीवनोपयोगी एवं मानवोपयोगी काममा मान्छेले ब्याक्टेरियाको उपयोगिता गर्ने तरीकाहरु भविष्यमा पत्ता लगाउदै जानै निश्चित छ ।